Dnepr (Dnipropetrovsk) - mumwe kupfuura guta maindasitiri muna Ukraine
Guta of the dnipro river (aimbova Dnipropetrovsk) kana Dnepr (ChiRussian) riri pamusoro Dnieper River (Dnepr kana of the dnipro river) muEast-Central Ukraine , uye ine vanhu 1 miriyoni (guta rechitatu munyika kuburikidza vokuparidzira).
Large uye yakanaka, ndiro guta chikuru East-Central Ukraine.
Of the dnipro river iguta simba uye vakasvinuka.
Guta zvinoshamisa mutema achitevedza rakafara anononoka zvokukurumidzira Dnieper rwizi (Dnepr muna Russian, Of the dnipro river muna Ukrainian) uye ane embankments zvinoshamisa, boulevards refu uye wakapamhama nemapaki.
Ndirwowo zvikuru nzvimbo dzakakwirira-zvigadzirwa mumaindasitiri, dzidzo, muchina-kuvaka, simbi, vagotengeseranamo. Guta inozivikanwa yaro yezvokutengeserana indasitiri kwete chete, asi zvaro mambishi zvikomo uye nhoroondo zvakadzama.
The Old Nhare ugari yave iripo kubvira pakati pezana remakore rechi16. Guta idzva rakaumbwa 1776 nokuda Russian Prince, Potemkin kubudikidza nomurayiro Catherine II, Empress yeRussian Empire uye akanzi Yekaterinoslav (Ekaterinoslav) kubva 1776 kuti 1926. munguva 1918 zita reguta raiva Sicheslav (Kubwinya nokuti sich '/ nhare Cossacks).
of the dnipro river (Dnipropetrovsk) kwave chikuru muzinda esimbi bhizimisi kubva pakutanga kwezana remakore rechi20 kusvikira chipo. Chabva akatonga ari machinebuilding uye aero AND-spacebuilding bhizimisi sezvo 1950s.